Home Wararka Ciyaaraha Kieran Tierney oo qarka u saaran inuu saxiixo heshiis cusub oo shan...
Kieran Tierney ayaa lagu soo waramayaa in uu ‘wadahadalo horumarsan’ kula jiro Arsenal si uu heshiis cusub oo shan sano ah ugu saxiixo kooxda.
24 jirkaan ayaa 62 kulan u saftay Gunners tan iyo markii uu ka yimid Celtic sanadkii 2019, waxaana weli seddex sano uga hartay qandaraaskiisa haatan ee Emirates Stadium.
Tierney ayaa ku fiicnaaday kooxda Mikel Arteta intii lagu guda jiray ololihii 2020-21, isagoo gacan ka geystay labo gool iyo shan caawin 38 kulan oo tartamada oo dhan ah.
Sida laga soo xigtay The Telegraph , Arsenal ayaa wadahadalo horumar leh kula jirta ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Scotland oo qandaraas cusub oo shan sano ah u saxiixaya, taasoo ka turjumeysa muhiimadiisa kooxda.
Warbixinta ayaa sheegeysa in kooxda ka dhisan Waqooyiga London, ay sidoo kale wadahadalo kula jirto Brighton & Hove Albion ee ku aadan Ben White , ayna ku rajo weyn yihiin inay dhameystiraan wadahadalada maalmaha soo socda.
Tierney, oo la socda xulka Scotland ee xagaagan qaramada Yurub, ayaa dhaliyay hal gool isla markaana caawiye ka ahaa afar kale 27 kulan oo uu saftay Premier League xilli ciyaareedkii hore.
Previous articleLiverpool oo isku diyaarineysa inay xoojiso raacdada ay ugu jirto Florian Neuhaus
Next articleJuventus, Real Madrid, Manchester City ‘dhamaantood waxay doonayaan Kalvin Phillips’